Dad lagu dilay dalka Burundi - BBC Somali
Dad lagu dilay dalka Burundi
Ciidamada hubeysan ayaa toogasho ku dilay baar ku yaala magaaladda Bujumbura ee caasumadda u ah dalka Burundi todoba qof.
Duqa magaaladda ayaa ku timaamay dilkaa in uu ahaa mid bareer ah. Waxuuna sheegay in dadkaa lagu qasbay in ay dhulka dhabacdaan ka dibna si toos ah loo toogtay.
Dhimashada dadkan ayaa imaaneysa iyadoo uu dhacay waqtiga kama danbeysta ahaa oo ay dowladdu u qabatay in dadku ay hubka iska dhibaan ama ay la soo gudboonaato tilaabo dardar leh oo ay boliisku qaadaan.
Labaatan qof ayaa lagu dilay dalka Burundi todobaadkii la soo dhaafay, taas oo qeyb ka ah rabshada iyo dilal ka bilowday in madaxweyne Nkurunziza oo ku dhawaaqay in uu xili seddexaad u tartamayo jagada madaxtinimada.b